ချောင်းသာရောက်တုန်း လက်ဆော့ခြင်း – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ချောင်းသာရောက်တုန်း လက်ဆော့ခြင်း – ၁
ချောင်းသာရောက်တုန်း လက်ဆော့ခြင်း – ၁
Posted by etone on Dec 26, 2011 in Photography, Travel | 33 comments
ကမ်းစပ်ကခြေရာများ ထင်နေမလား လိုက်ရှာနေမိတယ်
ဘာတွေများ ပူဆာနေပါလိမ့် .. ။
ဓါတ်ပုံကြည့်ရတာ မောနေပြီဆိုလျှင်တော့ အုန်းရည်သောက်ကြပေါ့နော် ကြိုက်သလောက်သောက် ကျသလောက်ရှင်း .. တလုံးကို ၈၀၀ ထဲ
အုန်းရည်သောက်ပြီးလျှင် ငါးကင်လေးပါစား .. ငါးက ကကတစ်နဲ့ ငါးပါးနီ နှစ်မျိုးကိုပဲ ကင်ရောင်းပါသတဲ့ ... ငါးပါးနီသာပြောတာ ... ခေါင်းခွဲကြည့်တော့ ... ပါးတ၀ိုက် ဆေးနီတွေသုတ်ထားတယ် ... အံ့ရော
ပါးအို့ နီ လေး ဖြစ်အောင်
ငါးပါးနီ က revlon တံဆိပ်သုံးတာဆိုတော့
မာမီပေ လို့ ခေါ်သကွဲ့ 
အဲဒီငါးကင် က အရသာ မရှိဘူးဗျ။
ရန်ကုန်က ငါးကင်တွေက ရေချိုငါး တီလားဗီးယားတွေဆိုတော့
ချိုတယ်။ အဲဒီက ငါးတွေက ရေငန်ငါးတွေဆိုတော့ အရသာ သိတ်မရှိဘူးဗျ။
အရက်နဲ့ သောက်ဖို့ ၀ယ်စားကြည့်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးကို ၀င်ရွှီးသွားတာပါဗျာ။
ဆရာဘလက်ရေ ကျွန်တော် ပင်လယ်ဘက်မှာ သုံးနှစ်လောက် နေဘူးသဗျ ..
သူတို့ ကင်ရောင်းတာတွေက ပေါပေါရတာတွေကို ရောင်းတန်းကင်လို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်
ပင်လယ်ငါးက ချိုတဲ့နေရာမှာ ရေချိုငါး ဘယ်လိုမှ လိုက်မမှီဘူး
ပင်လယ်ငါးစားပြီးရင် ရေချိုငါး ပါးစပ်ထဲကို တိုးကို မတိုးတော့တာ
ပြည်မဘက်ပြန်ရောက်တော့ ငါးတောင် မစားချင်သလောက်ဖြစ်သွားတယ်
ရခိုင်မုန့်တီ စစ်စစ် နာမည်ကြီးတာ ပင်လယ်ငါးက အဓိကပေါ့
ဒီတော့ ရခိုင်ဘက်တွေ ရောက်ရင် ဒေသခံတွေကို မေးပြီး မုန့်တီနဲ့ ပင်လယ်ငါး မြည်းစမ်းကြည့်စေချင်ပါကြောင်း …ငါးကျိန္တလီဆိုတဲ့ငါး ကင်စား ချက်စား ကြော်စား သိပ်ကောင်း
ငါးကင်ကောင်းကောင်းစားချင်လျှင် ၀ါတန်းလမ်း အထက်ဘလောက်က Doreen ကိုသွား … အဲ့ဒီမှာ .. တီလားဗီးယားငါးကို ဗိုက်ခွဲ …. အညစ်ကြေးတွေ ထုတ်ပြီး ဂျင်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ စပါးလင် နဲ့ ငရုတ်သီးတွေ နှုတ်နှုတ်စင်းပြီး ထည့်ကင်တာ …အသားက မွှေး….အရေခွံက ကြွတ်ရွနေတာပဲ …. ။ အဲ့ဒီငါးကင်ကို သံပုရာသီးလေး တခြမ်းလောက်ညှစ်ပြီးစားလိုက်လို့ကတော့ … ဆွေမျိုးတောင်မေ့သွားမယ် … ။
ဘီယာလေးကလည်း .. အမြှုပ်တစီစီနဲ့ … ဖန်ခွက်တောင် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားလို့ အေးခဲနေတာ …. ။ အရမ်း အရသာရှိတယ် … ဈေးကလည်း မများဘူး … ပေးပျော်တဲ့ဈေးပါ … ။ တကောင်မှ သုံးထောင်နဲ့ … လေးထောင်ကြားပဲ ရှိတယ် … ။ ဘီယာကလည်း အပြင်ပေါက်ဈေးထက် နည်းနည်းပဲ ပိုရောင်းတယ် … ။ ဟီး … သွားရည်တောင်ကျလာပြီ … ရှလွှတ် …. ရှလွှတ် …
အမလေး ရေးတဲ့ သူကလည်း ရေးတက်လိုက်တာ ဖတ်ရင်းနဲ့
သွားရည်တောင်ကျလာပြီ … ရှလွှတ် …. ရှလွှတ် …
မမ etone ကြေငြာတုန်း lone လည်း ၀င်ကြေငြာလိုက်ဦးမယ်…BAK အနောက်ဘက် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းက Power လည်း ငါးကင်ကောင်းတယ်နော်…ငါးခဲပတ်ကင်…ရှယ်ပဲ…waiter လာချပြီဆို အနံ့ ကလေးကတင် သရေကျစရာကောင်းတယ်…ငါးအသားလေးတွေကလည်းနူးပြီးအိနေတာပဲ…အရိုးတွေက၀ါးစးလို့ပါရတယ် အချဉ်အစပ် ရောတာလည်း အရမ်းကောင်းပြီး မွှေးနေတာပဲ..ဈေးကဇလားပီးယားဆို 3300 ၊ကတ်ကတစ်ဆို4200၊ ဒါပေမယ့် ဇလားပီးယားကပိုကောင်းတယ်……ရန်ကင်းက အစ်မတစ်ယောက်တောင် တစ်ခါခေါ်ကျွေးလိုက်တာ ကြိုက်သွားလို့…အမြဲသွားစားတယ်… ဦးပေတို့၊ ဦးပေါက်တို့၊ကိုရင်စည်သူတို့လည်း ရန်ကုန်ရောက်ရင် အဲဒီ့ဆိုင်ကိုသွားနော်..အထပ်နှစ်ထပ်ရှိတယ်..အပေါ်ထပ်က aircon နဲ့ အောက်ထပ်ကတော့ရိုးရိုး…တစ်သောင်းဖိုးကျော်ရင်..သစ်သီးပွဲပေးတယ်…ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း အလယ်ဘလောက်မှာနော်… ၀င်ကြေငြာသွားတာ…မမetone ပြောတဲ့ဆိုင်လည်း သွားစားကြည့်ဦးမယ်…. မမetone လည်း ကြုံရင် lone ပြောတဲ့ဆိုင်သွားကြည့်လိုက်ဦးနော်…
lone ရေ … BAK နဲ့ ကပ်နေတဲ့ဆိုင်လား … သွားစားပါဦးမယ် … ငါးဆိုလျှင် အရမ်းကြိုက်လို့ပါ …
ပင်လယ်ပြင်ကြီးရယ် အုန်းရည်ရယ် ငါးကင်ရယ်မြင်ပြီး
etone မန်းတာကိုဖတ်ပြီး ပိုလို့တောင်ဆိုးသွားပြီး
နီးနီးနားနား ၀ါးတန်းလမ်းသွားပြီး ရှလွတ်တာဘဲကောင်းတယ်
BAK နဲ့နောက်ကျောဘက်က … power ဆိုင်…မမ etone … ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမကြီးပေါ်က…BAK ရောက်ရင်…ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းမကြီးဘက်ကိုချိုးပြီး…အနောက်ဘက်နဲနဲလျှောက်လိုက်ပါ…စားချင်ရင်…တူတူသွားစားကြမယ်…တစ်ရက်ချိန်းပြီး…. … ဟဲဟဲ….
BAK နဲ့ကပ်လျက်က …မာလာဟင်း၊ရှမ်းခေါက်ဆွဲဆိုင် ကမဟုတ်ဘူးနော်….ဒါပေမယ့် အဲ့ဆိုင်က ….မာလာဟင်းလည်း စားလို့ကောင်းတယ်…အနံ့ကမွှေးနေတာပဲ…
ဒါထက် ဦးဖက်တီးက ဘယ်တုန်းက ချောင်းသာကို ရောက်သွားတာလဲ
ပုံ (၈) တွင် ရှု
ကမ်းစပ် အကင်တွေဆို တစ်ခုမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူး
တခါက ဘီဘီနဲ့ ကစ်ဖို့ အကင်ဝယ်စားတာ ဈေးကလည်းကြီး
စားကလည်းမကောင်းနဲ့ ဘီဘီအရသာတောင် ပျက်သွားတယ်
ဒေါ်အိတုံက လက်ဆော့ထားတာ တော်တော်ကြီးနေတယ်နော်… အဟီးး..
ကိုရင်နော် ဆင်ဆာမလွတ်ထာတွေ မပြောနဲ့
မမ Etone က လက်မြန်တယ်နော် … ကိုရင့်ခေါင်းမှာ ပလစတာ ကပ်နေရအုံးမယ် ….
လာကြည့်ရတာ ဗိုက်တာဆာသွားပီ …
ငါးက အစိမ်းလိုက်ဝယ်ပြီး … ကိုယ့်ဖာသာ ကင်စားရင် ပိုကောင်းပါကြောင်း …
ဗိုက်ဆာဆာနှင့် ၀င်ရောက် ရွှီးသွားပါတယ် …
ကရင်စီရေ .. …. ဆိုဒ်ကတော့ အကြီးကြီးပဲ .. ဓါတ်ပုံဆိုဒ်ပြောပါဒယ်
နဂို ဆိုဒ်ထက် ထက်ဝက်လောက် ရီဆိုဒ်လုပ်ထားတာတောင် ကြီးနေသေးတယ် … ။ ဟီး … ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို အားရပါးရ ရှူစားရအောင် အကြီးကြီးကို ထပ်မချုံ့ တော့တာ … ။
အကင်တွေ မကောင်းမှန်း သိပေမယ့် .. ဟိုရောက်လျှင် ငတ်တာ … ဘယ်လို ငတ်မှန်းမသိအောင် ငတ်တာ … ထုံးစံ ..
အင်းအင်း… အင်တာနက်လိုင်းကောင်းတဲ့ သူတွေကျတော့လည်း
တင်လိုက်ရင် အကြီးကြီးနဲ့ အားကျထှာ…
အိတုံးနဲ့ ငတ်တာချင်းတော့ တူသွားပီဗျို့…
အုန်းခရုလေကင် ဘီယာလေးနဲ့ (အဲမွားလို့)
မမတုံ မှားနေပြီ ငါးကင်က ထန်းရည်နဲ့ ပိုလိုက်ဖက်တယ်ဗျ
ရွာသားတွေ အကြိုက် မတုံ မသိသေးပါလား ကောင်မလေးတွေ ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ရေကူးနေတာတွေပဲ ရိုက်ခဲ့ရမှာ အကောင်းဆုံး ပို.စ်တောင်ဖြစ်သွားအုံးမယ်
တို့ဆီက ကမ်းခြေကမှ လှတာ အပင်တွေနဲ့ သဲသောင်တွေလည်း ဖြူးလို့။ ဒီမှာ တခါလားပဲ မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ ရေသွားကူးပါတယ် လှိုင်းရိုက်ခံရလို့ ကျောတွေအောင့်တာ သုံးရက်လောက် ခံလိုက်ရတယ်။
မမှီရေ … ပင်လယ်ကမ်းခြေသာသွားတာ .. .ရေဆိုလျှင် အရမ်းကြောက်ပဲ .. ဟီး
(ရေကူးသင်ဖူးတယ် .. ဘယ်လောက်သင်သင် မတတ်ဘူးလေ .. .ရေထဲ ချလိုက်တာနဲ့ .. ကူးရကောင်းမှန်း နားမလည်ဘူး .. ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ .. နစ်ပါလေရော …. ) သင်တုန်းကတော့ ခဏကူးတတ်လိုက်သေးတယ် … ရေအမြဲ မကူးတော့ .. နောက်တခါ လေးပေကန် ရေထဲဆင်းလည်း ရေကြောက်သေးတာပဲ … ။
ရေသေမှာတောင် ဒီလောက်ကြောက်တာ … ရေရှင်ဖြစ်တဲ့ …ချောင်းသာမှာလည်း ကြောက်လွန်းလို့ .. ဒူးဆစ်လောက်ရေထဲ ဘောကွင်းတကွင်းနဲ့ ငုတ်တုပ်ထိုင်နေရတယ် .. ရုံးကလူတွေက ရေနက်ထဲ ဆွဲခေါ်သွားတော့မှ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ဘောကွင်းခိုထားတာ … လက်မောင်းတွေကို အောင့်နေတာပဲ… ပြန်ရောက်ပြီး နှစ်ရက် .. သုံးရက်ထိ လက်တွေ ခြေတွေ ကိုက်ခဲနေတုန်းပဲ … ။ လူလည်း … စန်း ဘလော့တွေ ဘယ်လောက် လိမ်းလိမ်း မီးသွေးခဲဖြစ်ပြီး ပြန်ခဲ့ရတယ် ဟီး
အိုးးးးးးးးးးးးးး နိုးဂွတ် နိုးဂွတ်
ယူတို့ ဗမာပြည် ကမ်းစပ်က ဘောပုတ်တဲ့ကွင်းတွေ
ဘဲရီးဘဲရီး ညစ်ပတ် ဒါးတီးတယ်
အိုင်တို့ နိုင်ဂျံဂါး ကမ်းစပ်မှာ ဘာအမှိုက်မှ မရှိဘူး
အပေါ်ကနေ ငါးပုံမြောက်မှာ ကမ်းစပ် မြက်တောင်ပေါက်တယ်
( စိုက်ထားတာလား ဘာလားသိဘူး )
ဝ မိန်းမ စစ်စာရှိတာ မျက်တောင်ပေါက်လယ်ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ
အားရိုးရိုး လှတယ်နော် (ဘတ်) ဘောတွေပဲတွေ့တယ် ဘီကီနီလေးတွေပါရင် ပိုလှမယ် (ကြိုက်တတ်တာပြောတာပါ)
ချောင်းသာပုံတွေက အရမ်းအဆမတန်ကြီးနေတယ်ညီမလေးရေ… ကွန်ကျနေလို့လားမသိဘူး။ ကြည့်ရတာလည်းကြာတယ်။ ပုံတွေကြည့်ရတာ လိုင်လိုင်းဟိုတယ်မှာတည်းတာလား MAX ဟိုတယ်မှာ တည်းတာလားညီမလေး….
အစ်မ မနောရေ … ဘယ်ဟိုတယ်မှာမှ မတည်းခဲ့ပါဘူး … ဈေးက ကြီးသကိုး
သောင်ပြင်မှာ ရွက်ဖျဉ်တဲ ထိုးနေတာပါ … အုန်းသီးကို ခေါင်းအုံးအိပ်ပြီ .. အိမ်သာအတွက်ကတော့ .. ပင်လယ်ကို အားကိုးပါတယ် … ဟဲဟဲ
ချောင်း သာ ၊ ငွေဆောင် ငပလီေ၇ာက် ဖူး တယ် ။ င ပလီ က အ လှ ဆုံး။
ထောက်ခံတယ်ဗျို့ …ဆက်စဲ နဲ့ ကျိုက်ခ္မီပါ ဖြည့်မယ်ဗျာ …
ငပလီက အလှဆုံး ပြီး …. ရေအကြည်ဆုံး
ကိုဘေးနွားကင်နဲ့ ငါးကင်၊ အုန်းရည်နဲ့ ဘီယာ ဘယ်ဒင်းဘယ်ဟာ ပိုကောင်းသလဲဗျို့။။။
မအိတုန် တော်တော်မှ မဲ ခဲ့ရဲ့ လား။ အသားပြောတာ။ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ မအိတုန်ရဲ့အသားအရေ မဲပြာပြီးပြောင်လက်နေမယ်ထင်တယ်
E.T ပြန်ရောက်ပလား ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုလ်ပေါ်က …
သိပ်တော့ မဲမလာခဲ့ပါဘူး … ပိတုန်းရောင်ပေါက်ပြီး မဟူရာရောင် လက်နေတာပဲ ဟဲဟဲ
အဟီးး အပျော်လွန်ပီးလျှောက်သွားနေတာ။ ကွန်တွေကလည်းကောင်းဘူးလေ ပိတုန်းရောင်အသားအရေလေးနဲ့ ဆိုတော့ အရမ်းကို လှနေတယ်ပေါ့